Professional Professional Amabhodlela ePlastiki | Fukang
Ibhodlela lezilwane ezikhethwa amakhemikhali
Imbiza ye-cosmetic jar
Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni nasekuthumeleni izinhlobo ezahlukene zamabhodlela e-PET ne-HDPE.
Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni nasekuthumeleni izinhlobo ezahlukene zamabhodlela e-PET ne-HDPE. ezisetshenziselwa ikakhulukazi ekhemisi nokudla kwezimboni, zonke izinto ziyibanga lokudla futhi zidlulile izitifiketi ze-FDA, EU, LFGB,
Fukang Plastic Food Jar Nut Chocolate Cookie Isitsha
Amabhodlela we-NUTIsitsha sepulasitiki sezinongoIbhodlela elimnandi lepulasitikiUkukhiqizwa kwamabhodlela kanye nama-cap ahlukile, ibhodlela lezilwane lezilwane lidinga ukukhiqiza umbungu kuqala, bese usebenzisa ubuchwepheshe obushayayo ukuze bakhiqize amabhodlela, i-cap yisinyathelo esisodwa kuphela.
Fukang contiment ibhodlela lesiqukathi sokubopha uSalp Pepper Grinder
Fukang pet Health Care Care Care Petrine Amabhodlela Wokusetshenziswa Kwezithimba
Ibhodlela lokunakekelwa kwempilo yezilwane ezifuywayoabakhiqizi bebhodlela lezemithiizimbiza ze-splement zepulasitikiZizwe ukhululekile ukuxhumana nathi!SiyiFukang Plastic Products Co., Ltd, sasungulwa ngonyaka we-2006 futhi sinokuhlangenwe nakho okuningi okuthunyelwe kwamanye amazwe, singakusiza kukho konke mayelana nokungenisa okuvela eChina, futhi singakhiqiza izingcezu eziyi-1500000 nsuku zonke.
Ukukhiqizwa kwamabhodlela kanye nama-cap ahlukile, ibhodlela lezilwane lezilwane lidinga ukukhiqiza umbungu kuqala, bese usebenzisa ubuchwepheshe obushayayo ukuze bakhiqize amabhodlela, i-cap yisinyathelo esisodwa kuphela.Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi!
(1) Umbala wangokwezifiso: Singenza noma yimuphi umbala wamabhodlela epulasitiki ngokuya ngenombolo yakho yombala we-pantone
(2) Idizayini yangokwezifiso: Uma unomklamo wakho, wamukelekile ukuthumela umklamo wakho noma isampula kithi, singenza ngokwezicelo zakho ezithile.
(3) I-logo / ilebula yangokwezifiso: I-logo yakho ingafakwa emikhiqizweni yakho ngokushaya isitampu esishisayo, ukuphrinta kwesilika, ukufaka embossing, ukumboza i-UV, isitikha noma ifilimu elincishayo.
(4) Isampula yamahhala: Singakunika amabhodlela wamahhala wokuhlola ikhwalithi.
Fukang Freight ngaphambi kokuthumela izimpahla ezinkulu zomthwalo
Ukuthunyelwa. Ukusebenza okuhle kwenza lo mkhiqizo ulungele ukusetshenziswa nazo zonke izinhlobo zamaphrojektha, ikakhulukazi ngezidingo ezikhulayo zencazelo ephezulu yempahla.
Fukang thina kanye namakhasimende ethu sihlangana empilweni yangempela
Ezisetshenziselwa kakhulu ikhemisi kanye nezimboni zokudla, zonke izinto zokwakha zingamabanga okudla futhi zidluliselwe i-FDA, i-EU, izitifiketi ze-LFGB, futhi imikhiqizo yethu ithandwa kakhulu e-Australia, e-India, eNewland, eNewland, Newland, Newland .
I-Dongguan Fukang Product Product Co, Ltd. Isungulwe ngonyaka ka-2009, etholakala eDongguan City, eGuangdong, China futhi yamboza amamitha-skwele angama-9000.Ngomsebenzi onamakhono angama-80, ama-20pcs ajova imishini nemishini yokushaya. Sikhethekile ekwenziweni kanye nokuthumela ngaphandle izinhlobo ezahlukene zamabhodlela ezilwane zasekhaya ne-HDPE. Okusetshenziselwa ikakhulukazi i-pharmasave kanye nezimboni zokudla, inkampani yethu idlulise i-GB / T19001-2016 / iso9001: Izitifiketi zokuphatha ezisezingeni 2015, i-SGGB, izitifiketi ze-SGS futhi imikhiqizo yethu idume kakhulu ngaphakathi I-Australia, eBrazil, eCanada, United States, India, eNew Zealand, eMexico, i-Philippine njll. Amabhodlela okudla, amaphilisi kanye namathebulethi, njll. Amabhodlela okudla asetshenzisiwe Ngokuqukethe izinhlobo ezahlukene zokudla, ezinjengamakhawuti, amakhukhi, ushokoledi, amantongomane, ibhotela lamantongomane ukudla, amabhodlela epulasitiki afana nawo, njengokupakisha amathoyizi, amathayela, amathoyizi, izipho, Ubucwebe, ubucwebe kanye nemikhiqizo ye-elekthronikhi Siphinde futhi sinikeze insizakalo ye-OEM, njengokwenza isikhunta esisha kanye ne-logo yephrinta njengoba i-Designwe yeKhasimende likwamukela ngokweqiniso nathi.
Iminyaka engama-21 ukugxila emabhodleleni epulasitiki
I-Dongguan Fukang Plastic Products Co, Ltd esungulwe ngo-1999, etholakala eGuangdong, eChina futhi yahlanganisa amamitha-skwele angama-9000. Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni nasekuthumeleni izinhlobo ezahlukene zamabhodlela e-PET ne-HDPE. ezisetshenziselwa ikakhulukazi ekhemisi nokudla kwezimboni, zonke izinto ziyibanga lokudla futhi zidlulile izitifiketi ze-FDA, i-EU 、 LFGB, futhi imikhiqizo yethu ithandwa kakhulu e-Australia, eBrazil, eCanada, e-United States, e-India, e-Newsland, eMexico, e-Philippines njll ...